राष्ट्रपति भण्डारीबाट वसन्त श्रवण (फोटोफिचर )
काठमाडौँ, ८ माघ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी वसन्त पञ्चमीका अवसरमा ऐतिहासिक हनुमानढोका दरबारस्थित नासलचोक जानुभई वसन्त श्रवण तथा प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको छ । आज बिहान
काठमाडौँ, ८ माघ : निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले २४ माघमा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको केन्द्रीयस्तरको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभएको छ । सातवटै प्रदेशमा खटिने प्राविधिक कर्मचारीका लागि आज आयोगमा
युवा पुस्ताका भाषणमा मात्रै लोकप्रिय हुन्, काम गर्न सक्दैनन् ८ माघ, काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांडग्रेसलाई परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्दै विशेष महाधिवेशन वा अर्ली महाधिवेशनमार्फत शेरबहादुर
प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दिए ओलीलाई बधाई, भारतमा स्वागत गर्न प्रतिक्षारत रहेको भनाई
काठमाडौं, ७ माद्ध । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग टेलिफोनमा वार्ता गरेका छन्। ओलीलाई आइतबार अपरान्ह भारती प्रधानमन्त्री मोदीले टेलिफोन गरेर भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा शुभकामना दिएका
बालकोटमा ओली–प्रचण्डवीच किन कुरा मिलेन ?
काठमाडौं, ७ माघ । वाम गठबन्धनका प्रमुख नेताद्धय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डवीच पार्टी एकताबारे ठोस सहमति नभईकन सम्पन्न भएको छ । एमाले
किन देउवाले पूर्वराजावादीलाई प्रदेश प्रमुख बनाए ?
काठमाडौं, ७ माघ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नियुक्त गरेका ७ वटै प्रदेश प्रमुखह?ले आज पदभार ग्रहण गरेर पनि प्रदेश सभा सदस्यह?लाई सपथ खुवाएर आफ्नो कामको थालनी गरिसकेका छन् । लामो
सपथ ग्रहणसँगै मुख्यमन्त्रीको चर्चा, यि हुन सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको सम्भावना भएका सासंदहरु
७ माघ, काठमाण्डौ । आज प्रदेशसभाका सदस्यहरुले सपथ लिएसँगै मूख्यमन्त्रीको चर्चा सुरु भएको । सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रका लागि प्रदेश सासंदहरुले दाबी गरेका छन् । प्रदेश नम्बर एकमा शेरधान राईले दाबी
नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्न बामदेव गौतमको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन
७ माघ, काठमाण्डौ । नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले एकता संयोजन समितिको बैठक सकिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा सम्पन्न बैठकले आगामी सरकारले गर्ने कामका बारेमा
सुमार्गीको सम्पत्तिबारे छानबिन दोस्रो चरणमा पुग्यो, विदेशी संस्थासँग समन्वय गरेर अघि बढ्छौं : अर्थराज्यमन्त्री राणा
काठमाडौं, ७ माघ । अर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर राणाले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको सम्पत्तिको बारेमा गरिएको छानबिन दोस्रो चरणमा पुगेको बताएका छन् । मन्त्री राणाले अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणको अनुसन्धान सम्पन्न गरेर दोस्रो
नवराज सिलवाललाई समात्न गएका १ सय ६५ जना प्रहरी रित्तो हात फर्किए
७ माघ, काठमाण्डौ । नवराज सिलवाललाई खोज्न ललितपुरको भट्टेडाँडा पुगेको प्रहरीको टोलीले सिलवाललाई फेला पार्न असफल भएको छ । बढुवाका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) कीर्ते गरेको अभियोगमा छानविन गर्न खोजेदेखि
सातै प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको शपथ, प्रदेश २ को सपथमा भाषा विवाद
७ माघ, काठमाडौं । सातै प्रदेशका प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्यहरूको आइतबार सम्बन्धित प्रदेशका अस्थायी मुकामहरूमा पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण भएको छ ।संविधान र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनअनुसार प्रदेशसभामा निर्वाचित ज्येष्ठ सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले र
देउवालाई चुनौति दिदै प्रकाशमान, समानुपातिकमा आफ्ना मान्छे थुपारेर दलको नेता बन्ने दौडमा देउवा
७ माघ, काठमाण्डौ । कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह भिड्ने भएका छन् । केन्द्रिय समितिको बैठकमा देउवाप्रति निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका सिंहले संसदीय दलको